ओसाका अगस्टमा मौसम! तापमान र वर्षा - Best of Japan
Namba पार्क, Namba जिल्ला मा एक शपिंग सेन्टर ओसाका, जापान = शटरस्टक
यस पृष्ठमा, म अगस्तमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। म पहिले ओसाकामा बस्थेको छु। ओसाका अगस्त मा वास्तव मा तातो छ। त्यसो भए, यदि तपाईं अगस्तमा ओसाकामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं कहिलेकाँही वातानुकूलित कोठामा खर्च गर्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो शक्ति खपत गर्नुहुन्न।
तल अगस्तमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ।
ओसाका मा मौसम अगस्टमा (अवलोकन)
ओसाका मौसम अगस्तको सुरूमा (२०१))
अगस्टको बीचमा ओसाका मौसम (२०१ 2018)
अगस्तको अन्तमा ओसाका मौसम (२०१))
ग्राफ: अगस्तमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन
ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जत्तिकै उस्तै हो। जे होस्, टोकियो आदिको तुलनामा, ओसाका शहरको केन्द्र अगस्टमा थोरै तातो छ। ओसाकाको बीचमा, हरियो सानो छ, केहि ओसाका कासल र अन्य बाहेक। डामर सडक बलियो सूर्यको प्रकाशको साथ तातो हुँदैछ, त्यसैले यदि तपाईं सबै मार्गमा हिड्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईंको फिटनेस थकाउने जोखिम छ।
यस कारणका लागि, म निम्न तीन चीजहरूको सिफारिश गर्न चाहन्छु। पहिले, कृपया थोरै चिसो बिहान वा साँझ घरको बाहिर घुम्न जान यथासम्भव योजना बनाउनुहोस्।
उदाहरण को लागी, Namba जो ओसाका मा एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हो, नियन सुन्दर छ यदि तपाईं राती जानुभयो भने। यो राती समय क्षेत्रको राम्रो प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ।
दोस्रो, सकेसम्म वातानुकूलित भवनमा बिताएको समय बढाउनुहोस्। उदाहरण को लागी, Kaiyukan (एक्वैरियम) वा कपनुडल्स संग्रहालय (संग्रहालय) जस्ता सुविधाहरूको मजा लिने बारे कसरी?
तेस्रो, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं तुलनात्मक रूपमा सुन्दर क्षेत्रहरू थप्नुहोस् जस्तै होक्काइडो तपाईंको यात्रामा, ओसाका बाहेक। यदि तपाईं होक्काइडो वा होन्शुको उच्च भूमिमा जानुहुन्छ भने, मलाई लाग्दछ कि तपाईं पक्कै पनि आरामदायी तापमानको साथ आफ्नो ऊर्जा पुनः प्राप्त गर्नुहुनेछ।
न्यूनतम वायु तापमान 24.2
अगस्त5२०१ 2017: ऐतिहासिक महलको पार्क, ओसाका, जापान = शटरस्टक
ओसाका अगस्टको सुरूमा वर्षको तातो मौसम हो। दिनको अधिकतम तापमान degrees 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी छ। त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्, तर साँझमा पानी पर्न सक्छ, त्यसैले छाता बोक्नुहोस्।
ओसाकामा अगस्टको शुरुमा सूर्योदय समय करीव :5:१० छ, र सूर्यास्त समय लगभग १:10::18 छ।
न्यूनतम वायु तापमान 19.9
१२ अगस्त २०१ - - ओसाका, जापान = शटरस्टकमा उम्मेदमा क्रसवाकमा हिँडिरहेका मानिसहरू
मध्य अगस्तमा, दिनको अधिकतम तापक्रम hot hot डिग्रीको आसपास तातो रहन्छ। जापानमा, धेरै मानिसहरूले यस समयमा गर्मी बिदा लिन्छन्।
ओसाकामा मध्य अगस्टमा सूर्योदय समय करीव 5:१:18 छ र सूर्यास्त समय लगभग १:18::47 छ।
न्यूनतम वायु तापमान 25.1
अगस्त २,, २०१28,2018; ओसाका, जापान = शटरस्टकमा प्रख्यात शहर शिन्सेकाईको भ्रमण गर्ने पर्यटक
अगस्तको अन्तमा, ओसाकामा तातो र आर्द्र दिन जारी छ। जे होस्, तापक्रम बिहान र साँझमा अलिकता खस्न सक्छ। शरद ofतुको वातावरण बिस्तारै देखिन थाल्छ।
ओसाका मा अगस्ट मा सूर्योदय समय करीव 5:२:25, र सूर्यास्त समय लगभग १ approximately::18। छ।